သင်္ကေတ: မာတင် Vrijland
အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး MH17 အစိမ်းရောင် '' ဖဲကြိုး '၌ All-မြင်နေမျက်စိ stunning
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 31 2016 အပေါ်	• 12 မှတ်ချက်
Vijfhuizen မကြာမီကပ်ဘေး MH17 ၏သားကောင်များအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာ Foundation မှအမျိုးသားမော်ကွန်းတိုင် MH17 တစ်ခုပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုအတော်လေးဒီကဗျာအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး၏အမှတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး၏အောက်ပါအနုပညာရှင်တွေစှဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သည်အစိမ်းရောင်ဖဲကြိုး (ဖဲကြိုး) တွင်တစ်ခု All-မြင်နေမျက်စိရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အဲဒီမှာ [ ... ]
Samsung က, Google ဆက်သွယ်မှုလေ့လာရေးနှင့်လူနှင့်စက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Fusion ကို
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 30 2016 အပေါ်	• 1 မှတ်ချက်
ဆက်သွယ်မှုလေ့လာရေးဂရိκυβερνήτης (kybernetes, အိမ်ထောင်ဖက်) မှဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်တုံ့ပြန်ချက်ကို အသုံးပြု. ဇီဝနှင့်စက်မှုစနစ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဆကျဆံသောသိပ္ပံသည်။ တစ်ဦးက Cyborg (အင်္ဂလိပ်ဆက်သွယ်မှုလေ့လာရေးသက်ရှိဖြစ်သည့်ဆက်သွယ်မှုလေ့လာရေးသက်ရှိ) လူနှင့်စက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဝေါဟာရများကိုတစ်ဦး [ ... ] နေရာစိတ်ဝင်စားဖို့များမှာ
ဒါဝိဒ်သည် Bowie2ရက်ပေါင်း 69e မွေးနေ့ကွယ်လွန်
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	ဇန်နဝါရီလ 11 2016 အပေါ်	• 18 မှတ်ချက်
နှစ်ရက်ကသူ့မွေးနေ့ကိုနောက်, 69 အသက်အရွယ်အပေါ်သောဒဏ္ဍာရီ Aleister Crowley ထောက်ခံသူဒါဝိဒ်သည် Bowie သတင်းစကား, မကြာမီကသူ့အယ်လ်ဘမ်သစ် '' က Black စတား '' ၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်သေဆုံးသွားသည်။ အဆိုပါ Bowie သေခြင်းတရားဖြစ်ကောင်းရပ်ရွာမှတဆင့်တစ်ဦးထိတ်လန့်သည်။ သူဟာအလွန်အမင်းလေးစားခြင်းနှင့်လူသိများတဲ့လျှင်မရအကြီးအဂီတပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါက [ ... ] မှာအနည်းဆုံးဖြစ်ပါသည်
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	ဒီဇင်ဘာလ 10 2015 အပေါ်	•6မှတ်ချက်
ခရစ္စမတ်၏စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မယ့်သမိုင်းသို့တူးဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနည်းနည်းဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့စတင်သည်: Norse အယူမှားအစဉ်အလာ 12 ကာလ၌တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူမီးရှို့ပစ်ကြီးမားတဲ့ပင်စည်ဟာဘုရား Yule ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ အဆိုပါစည်ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါ၏သင်္ကေတဖြစ်ခဲ့သည်။ [ ... ]
911 1979 "ရာစုနှစ်ရာဇဝတ်မှု" တွင် Supertramp ကသီဆိုခဲ့သလဲ
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	အောက်တိုဘာလ 19 2015 အပေါ်	• 33 မှတ်ချက်
နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေကိုငါအနှစ် '' 70 မှစ. , တီးဝိုင်း Supertramp ၏အတော်လေး enamored သောကားထဲတွင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ဒါကဂီတဒီတော့ရိုးသားခဲ့ငါကောင်းတဲ့ထင်ကပြောကြားသည်။ တခါ, ဆွဲဆောင်မှု melodramatic နှင့်သာယာသောဂီတကိုချစ်၏။ သူက [ ... ] ငါ့ထံမှအယ်လ်ဘမ် "America မှာနံနက်စာ" ၏အဖုံးပြသ
အစ္စလာမ်ဘာသာ Saturn အမှတ်လက္ခဏာတွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်သည် 2
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	30 စက်တင်ဘာလ 2015 အပေါ်	• 14 မှတ်ချက်
မနေ့ကငါအစ္စလာမ်ဘာသာအတွက် Saturn အမှတ်လက္ခဏာတွေရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိနေခြင်းအပေါ်မှာငါ့အမြင်များပေးသောအတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တင်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာအာရုံအဓိကအားဖြင့်မက္ကာမှာရှိတဲ့ Kaaba နှင့် Saturn ၏မြောက်ဘက်တိုင်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဒါကတကယ့်အစိုင်အခဲအငြင်းအခုံအများအပြားမဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျက [ ... ] ဆက်ဆက်ငါ၏အရည်ရွယ်ချက်ကိုမဟုတ်ပါဘူး
အစ္စလာမ်ဘာသာ Saturn အမှတ်လက္ခဏာတွေလည်းပါဝင်သည်
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	29 စက်တင်ဘာလ 2015 အပေါ်	• 45 မှတ်ချက်
ငါ Facebook ပေါ်မှာအများအပြားမွတ်စ်လင်နောက်လိုက်ရှိသည်ကြောင့်ငါမကြာခဏကျွန်မဘာသာတရားဟာ Saturn အစွန်းရောက်တစ်ဦးတီထွင်မှုကြောင်းပြောနိုင်ဘယ်လိုမေးမွနျးရ။ စတင်ငါသူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုဖြည့်ဆည်းအကြောင်းကိုအလေးအနက်နေသောလူများအတွက်လေးစားမှုရှိသည်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်။ သူတို့ကအရမ်းသူတို့ဘဝသတိထားဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦး [ ... ] ပြီ
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	21 စက်တင်ဘာလ 2015 အပေါ်	• 10 မှတ်ချက်
ဂစ်တာကစားသူမည်သူမဆို 1x သည်သူ၏အသက်တာ၌ကစားခဲ့ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်အများအပြားကပိုအနည်းဆုံးအရေအတွက်ကရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ဂစ်တာလိုင်းသည်နှင့်သီချင်းအတွက်တစ်ကိုယ်တော်ယင်း၏အချိန်များအတွက်ထူးခြားသောဖြစ်ကြသည်။ [ ... ] စာသားအမြဲအနည်းငယ်ဝိုးတဝါးခဲ့ပေမယ့်လူသိဂီတပိုမိုဘုံဖြစ်ပါသည်
စီအီးအာရ်အင်, Shiva, အ Vedas, Saturn နဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏စီစဉ်ထားသည်ပျက်စီးခြင်း
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 17 2015 အပေါ်	•6မှတ်ချက်
ဤဆောင်းပါးကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် 'သင်၏ထောက်ခံမှု' ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အသင်းဝင်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဤအရာသည်သင့်အားဤဆောင်းပါး၏ကျန်အပိုင်းများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ သငျသညျစာအုပ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးဖတ်ကြရပေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤတံခါးခုံကိုလိုအပ်သည်။ သင်သည်အသင်းဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ယူရို ၂ / လ ဖြစ်၍ သင် […] ကိုဖြတ်သန်းရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီသည်။
ရှေး၏လေထုထဲတွင်သင်္ကေတများပိရမစ်သည် '' အားလုံးမြင်နေမျက်စိ 'နှင့်ပိုပြီးရှင်းပြ
အတွက် Filed အထိမ်းအမှတ်	by မာတင် Vrijland	ဧပြီလ72015 အပေါ်	• 1 မှတ်ချက်
သငျသညျရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေနေဆဲနှုတ်၌အစားအစာခဲ့အချို့သောအရာ၏အေးခဲကြီးမားသောတွေ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြသလား? ဒါကြောင့်ရုတ်တရက်အေးခဲညွှန်ပြ, ဒါကြောင့်အကြွင်းအကျန်အလွန်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပြီဖြစ်သောကြောင့်ငါအကြောင်းအရာကိုသင်တို့ထံသို့အဲဒီမှာချင်တယ်။ အဖြစ်ကျနော်တို့အခုကြီးမားသော [ ... ], ထို့နောက်ပုံမျှကြီးမားသောရေခဲစာရွက်များခဲ့သည့်မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင်နေထိုင်ခဲ့